Nhau - Nyowani yechando-yakaomeswa chikafu chemhuka
Chitsva chitsva-chakaomeswa chikafu chechipfuwo
1. Kuumbwa kwemidziyo mbishi muzvikamu nehuremu: zvikamu zana zvezvipfuyo nehuku yehuku, zvikamu zviviri zvemvura, zvikamu gumi nembiri zveglucose, zvikamu zvisere zveglycerin, uye zvikamu 0,8 zvetafura yemunyu. Pakati pavo, nyama yezvipfuyo ndeye huku.
2. Kugadzira maitiro:
(1) Kugadzirira: Pre-kurapa zvipfuyo uye nyama yehuku kuti uwane zvidimbu zvezvipfuyo uye nyama yehuku; gadzira zvipfuyo uye huku nyama, mvura, glucose, glycerol uye munyu zvinoenderana neyakaenzana muyero;
(2) Kurerutsira: sarudza zvipfuyo zvakakwana uye nyama yehuku wozviisa munzvimbo ye10 ° C kuti ubvise zvakasununguka kwemaawa gumi nemaviri;
(3) Cheka kuita zvidimbu: bvisa tendon, ganda nemafuta kubva munyama yakanyungudutswa uye huku, uye wozvicheka kuita zvidimbu zvakavezwa zvakavharirwa uye nyama yehuku; chimiro chechipfuwo nehuku yehuku inobvisa, yakaenzana, dhayamondi, katatu kana mamwe maumbirwo
(4) Kuchenesa: Isai zvipfuyo zvakachekwa uye nyama yehuku mumvura yakachena woishambidza zvakare, inyike mumvura inoyerera kwemaminitsi makumi maviri;
(5) Drainage: Isa iyo yakashambidzwa zvipfuyo nenyama yehuku pane dhayeti yekugera mvura, uye dhonza kwemaminitsi makumi matanhatu pa5 ℃;
(6) Tumble: Isa fomura yehuwandu hwechipfuwo nehuku yehuku mukati meiyo tumbler, uye wobva wawedzera huwandu hwesanganiswa remvura, glucose, glycerin uye munyu; batidza iyo tumbler kuti idonhe kuti utore wekutanga zvipfuyo uye yehuku nyama musanganiswa; kuzvidzora Ma parameter ari seanotevera: Mushure mekudonha kwembudzi yabviswa kuenda -0.06Mpa, nekumhanya kwe60r / min, inozotenderera mberi kwemaminetsi gumi uye ichidzosera kwemaminitsi gumi;
(7) Kumira: Isa musanganiswa wekutanga wezvipfuyo nehuku mumudziyo uye mira imire pa -8 ° C kwemaawa mana kuti uwane yechipiri mhuka yezvipfuyo nehuku yehuku.
(8) Isa dhishi uye gocha: Isai musanganiswa wechipiri wezvipfuwo nehuku paatiyiti, wozozviisa mukamuri yekuomesa. Iyo yekuomesa tembiricha iri 45 ° C uye iyo yekuomesa nguva maawa matanhatu. Yechitatu yakanaka zvipfuyo uye huku yehuku musanganiswa;
(9) Kutonhora: kutonhodza yechitatu zvipfuyo uye huku yehuku musanganiswa mune yakajairwa tembiricha uye yakaoma nharaunda kuwana yechina zvipfuyo uye yehuku nyama musanganiswa; iyo inotonhora tembiricha iri 30 ° C, iyo mhepo mwando iri 40%, uye iyo nguva yekutonhora - maawa matanhatu;
(10) Kukurumidza kutonhora: Isai musanganiswa wechina wezvipfuwo nehuku yehuku munzvimbo yekuchengetera nekukurumidza kutonhora kuti uwane yechishanu mhuka yezvipfuyo nehuku yehuku; kutonhora kupisa -40 ° C, nguva inotonhora maawa masere;
(11) -oma-kuomesa: Isai yechishanu yezvipfuyo uye nyama yehuku musanganiswa mubhini rekuoma-rekuomesa kuti uwane chikafu chechipfuwo chakaomeswa. Iyo lyophilization nguva maawa makumi maviri, uye tembiricha ye lyophilization iri -50 ° C.
(12) Kuonekwa kwesimbi: Isa chikafu chakaomeswa-chakaomeswa peturu patereyi, uye sarudza zvigadzirwa zvine zvigadzirwa zvesimbi kuburikidza nesimbi detector; simbi yekuona paramita Fe: 2mm, SuS: 1mm;
(13) Kuisa: Shandisa muchina wekutsvaira wekupemha chivharo, dhigirii yekubata -0.04MPa
(2) Kukurumidza kutonhora. Isa muyenzaniso mufiriji inokurumidza uye gwamba kusvika -18 ° C.
(3) Kubheka. Bvisa zvinhu, uzviise mutirairi yekubikira, wozvitumira kuchoto. (Kumusoro nekudzika moto, roast pa150 ℃ kwe5min, wobva watendeukira ku130 ℃ kwe10min). Bhura uchi hwakagadzirwa nemvura pane iyo nyama yakachengetedzwa uye wozvitumira kuchoto zvakare (kumusoro uye pasi moto, 130 ℃, 5min). Bvisai, vharai nepepa rakazorwa mafuta, riendese pamusoro petireyi yekubheka, bhurasha neuchi hwemvura, uye wozotumira muchoto (kumusoro uye pasi moto, 130 ℃, 20min inogona kubuda muchoto). Cheka nyama yakagochwa muchimiro chakakona.